ट्र्याक नम्बर : 09-2018-HXGSVB
निवेदकको नाम र ठेगाना : Sunil Pandey, Pokhara Nepal
बिषयकाे संक्षिप्त विवरण: पोखरा मा दिनहुँ जसो आगलागी भैराखेको छ। यो गण्डकी अस्पताल को मेडिकल वार्ड को गेटमा रहेको fire extinguisher हो। जस्को म्याद सकिएको जम्मा ८ बर्ष भयो। अस्पताल जस्तो ठाउँ मा आगोलागि भयो भने असक्त बिरामी लाइ कति गार्हो होला। यो भाँडो किन राखेको होला।
तालुक निकायबाट आवश्यक कार्य गरिसकिएको भनी जानकारी प्राप्त भएकोले फर्छ्यौट गरिएको । सुझावको लागि धन्यवाद । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी अस्पतालको मेडिकल वार्डको गेटमा रहेको पुरानो fire extinguisher को ठाँउमा नयाँ राखिसकिएको जानकारी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान , पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालका प्रमुख डा. अर्जुन आचार्यले दिनुभएको छ । जिज्ञासाको लागि धन्यवाद !! शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाई आवश्यक कारवाही गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय